ForexBot28 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
သြဂုတ်လ 13, 2020
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် ForexBot28 1
စျေးနှုန်း: $ 255 (၁ သက်တမ်းခွင့်ပြုချက်၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့် ၂၄/၇ မိတ်ဆွေများအတွက်ပံ့ပိုးမှု)
ငွေကြေးစွမ်း: 28 အားလုံးအတွက် (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF , NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY နှင့် USDSGD)
ForexBot28 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4အတွက်အကောင်းဆုံး Multi-Pair Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
ForexBot28 တစ်ဦးအကျိုးရှိ၏ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များကဖန်တီးခဲ့သည်။
ဤသည်အလွန်တိကျမှန်ကန် multi-Pair ကို Forex EA ၏ ကျော်ပေါ်တွင် Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းအရောင်းအများအတွက် 28 ငွေကြေးအားလုံး.
ဤရွေ့ကားအားလုံးများမှာ AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY နှင့် USDSGD ။
အဆိုပါ Forex EA ၏ အားလုံးငွေကြေးအားလုံးအပေါ် stably အလုပ်လုပ်တယ်နီးပါး3နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အကောင့်ပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖွငျ့ဤထေူ!
ForexBot28 အသုံးပြုမှု အာရုံကြောကွန်ရက်များ ထိုကဲ့သို့သောအထင်ကြီးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ကကူညီ။ မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုမကြုံစဖူးသောကြောင့် EA သည်အမြဲတမ်းကုန်သွယ်သည်။ FX market တွင်အမှာစာများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အမြတ်အစွန်းကိုသေချာစေပြီးအခြား EA's များကြုံတွေ့ရသောစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုနိမ့်ကျသည့်ကာလများကိုလည်းချန်လှပ်ထားသည်။
ဤ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အောက်ပါနိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်:
ကွန်ဆာဗေးတစ်မုဒ်: $ 10,000 (ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်အသေးစားနှင့် $ 1,000 များအတွက် $ 100)
ပုံမှန်အခြေအနေ: $ 5,000 (ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်အသေးစားနှင့် $ 500 များအတွက် $ 50)
ရန်လိုမုဒ်: $ 3,500 (ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်အသေးစားနှင့် $ 350 များအတွက် $ 35)
အဆိုပါ FX စက်ရုပ် နေသမျှကာလပတ်လုံးပွဲစားကို EA ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားအဖြစ်ပွဲစားနှင့်အကောင့်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အသုံးပြုတချို့ကပွဲစားများမှာ FxPro, ThinkMarkets, FortFS, USGFX, IC စျေးကွက်များသို့မဟုတ် Forex.com.
ForexBot28 - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make ForexBot28 နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
ForexBot28 - အကြောင်းကိုမကြားရသေးပါ FX ထရေးဒင်း ခင်မှာစက်ရုပ်?
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံကဘာလဲ ForexBot28 အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရိုးလေး FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်ဟာသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာနှင့်ပရိုဂရမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အ parameters တွေကို, အကြေးခွံနှင့်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏ကန့်သတ်သင်တို့အနားမှာထောက်ပံ့ခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
ForexBot28 အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ Forex အောက်ခြေ 28 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ForexBot28 - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ForexBot28 အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအစီငွေကြေးကို pair တစုံ၏ခွန်အားကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်ဥစ္စာတိုးပွားခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ Forex စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY နှင့် USDSGD ငွေကြေးစွမ်း။
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းယင်းနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုအကြံပြု ကွန်ဆာဗေးတစ် mode ကို 50% အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အမှု၌ ပုံမှန်အခြေအနေ အကြံပြုထားတဲ့အန္တရာယ် 35% (ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနှင့်အတူထရေးဒင်း ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ် သငျသညျ 25% အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ကိုသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျကို default အဖြစ်ထားသငျ့သည်အခြား parameters တွေကို။
ဒီ Forex EA ၏၏ installation ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ကူးယူနှင့်သင့် MT2 ကျွမ်းကျင်သူများကဖိုင်တွဲသို့4ဖိုင်တွေ paste ။ သင်တို့သည်နောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်သင့်တပ်ဆင်မှုအတွက်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အထောက်အကူပြုဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်!
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် Forex အောက်ခြေ 28. ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးရှင် 67% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူ 30 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ အကယ်. ForexBot28 ရက် ၃၀ အကုန်အထိအမြတ်အစွန်းမရခဲ့ဘူး၊ ရောင်းချသူကမင်းရဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးမှာပါ။ သင်၏အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေသည် ၄၀% ကျော်ပါကသင်အကြံပြုထားသောချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုသောအခြေအနေတွင်ချက်ချင်းပြန်အမ်းငွေကိုစတင်လိမ့်မည်။
ForexBot28 မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 255 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် ForexBot28 က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု
နေ့စွဲ Start: April လ 6, 2020
နေ့စွဲ Start: မေလ 12, 2020
Demo ပွဲစား: စျေးကွက်များစဉ်းစားပါ
Track Trader EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Hedge
အကောင်းဆုံး Multi-Pair ကို Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး 2018
ကွန်ဆာဗေးတစ် mode ကို
Forex အောက်ခြေ 28
Forex အောက်ခြေ 28 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
multi-Pair ကို Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
multi-Pair ကို Forex EA ၏
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့အောက်တိုဘာလ 2018
Forex်Spectre EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex BOT စနစ် 28 - BEST Multi-တွဲဖက် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး 2018 performance UPDATE: + 3.6% MONTHLY Return (အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! Forex အောက်ခြေ 28 - အကောင်းဆုံး Multi-Pair ကို Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး 2018 ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ: https://www.bestforexeas.com/forexbot28-review/ ForexBot28 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဤသည်အလွန်တိကျမှန်ကန် Multi-Pair ကို Forex EA ၏4ငွေကြေးအားလုံးကိုကျော်ပေါ် Metatrader4(MT28) ပလက်ဖောင်းအရောင်းအဘို့။ ဤရွေ့ကားအားလုံး AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD ဖြစ်ကြ၏... ဆက္ဖတ္ရန္